ဆောင်းပါးရှင် အာဘော် Archives - Page3of4- News @ M-Media
အောက်တိုဘာ ၂၁ ၊ ၂၀၁၅ M-Media ဆောင်းပါးအနှစ်ချုပ် မွတ်စ်လင်မ်တို့သည်အေဒီ ၈ရာစု အစပိုင်းမြန်မာ ကမ်းရိုးတန်းဒေသမြို့များသို့ရောက်ရှိလာခဲ့သည့် သမိုင်းကြောင်းများအရ မြန်မာနိုင်ငံ အတွင်း မှီတင်းနေထိုင်မှုနှစ်ပေါင်း တစ်ထောင် ၀န်းကျင်ကြာမြင့်ခဲ့လေပြီ။ သူတို့သည်သူတို့၏ သက်ဆိုင်ရာ ဘုရင်များနှင့် တိုင်းပြည်[Read More…]
October 21, 2015 — ဘာသာပြန်, သူ့အမြင်, ဆောင်းပါး, ဆောင်းပါးရှင် အာဘော်
ပထမဆုံးအကြိမ် မဲပေးမည့်သူတစ်ဦး၏ အခက်အခဲ
သင်းလဲ့ဝင်း ရန်ကုန် (Myanmar Now) – နေ့လယ်အစောပိုင်း ပြင်ပတွင် လင်းလင်းချင်းချင်းရှိသော်လည်း ဓမ္မာရုံ အတွင်းမှာတော့ မှောင်တောင်တောင်ဖြစ်နေသည်။ စာရွက်များကပ်ထားသော ဘုတ်ပြားများကို နံရံနှင့်၊ တိုင်များအနှံ့ ထောင်ထားသည်။ ဓမ္မာရုံဝင်ပေါက်နှင့်အဝေးဆုံးဘုတ်ပြားတွင် ကပ်ထားသော အေဖိုးစာရွက်အလယ်ပိုင်းတွင် ကျွန်မအမည်ကို [Read More…]
October 11, 2015 — ဆောင်းပါးရှင် အာဘော်
ဧပြီ ၇ ၊ ၂၀၁၅ M-Media အိမ်ဝေးသူ(KZ) ရေးသည်။ x “တရားမျှတ လွတ်လပ်ခြင်းနဲ့မသွေ…တို့ပြေ၊ တို့မြေ…. များလူခပ်သိမ်း ငြိမ်းချမ်းစေဖို့…. ခွင့်တူညီမျှ…. ၀ါဒဖြူ စင်တဲ့ပြည်… တို့ပြည်…. တို့မြေ… ပြည်ထောင်စုအမွေ အမြဲတည်တံ့စေ…[Read More…]
April 6, 2015 — ဆောင်းပါးရှင် အာဘော်
လူမျိုးရေး ပဋိပက္ခများ၊ မီဒီယာ လွတ်လပ်ခွင့်၊ ပြန်ကြားရေး ဝန်ကြီးဌာနနှင့် ဖွဲ့စည်းပုံပါ နိုင်ငံတော် အခြေခံမူ
မေ ၆၊ ၂၀၁၄ M-Media ဆောင်းပါးရှင် – မောင်သမာဓိ (၁) စာနယ်ဇင်း လွတ်လပ်ခွင့်ရပြီ။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် စာနယ်ဇင်း လွတ်လပ်ခွင့် ပေမီ ဒေါက်မီ ရနေပြီဟု ယုံကြည်ကြောင်း ပြန်ကြားရေး ဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယဝန်ကြီး[Read More…]
May 6, 2014 — ဆောင်းပါးရှင် အာဘော်